अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा महिला हिंसा विरुद्ध 'वक फर वेलफेयर' - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा महिला हिंसा विरुद्ध ‘वक फर वेलफेयर’
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०६:२२ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरुले महिला हिँसाको विरुद्ध र मानसिक स्वास्थ्यको लागि अहिले देशभर अभियान चलाइरहेका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले उक्त अभियान अन्तर्गत ‘वक फर वेलफेयर’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रम देशका विभिन्न राज्यमा फरक-फरक दिनमा हुँदै आएको छ ।
नेपाली समुदायमा विशेष गरि अष्ट्रेलिया आएका नयाँ नेपाली महिलाहरु हिंसाको सिकार भएका छन् भने अरु महिलाहरुले पनि शारीरिक तथा मानसिक हिंसा सहँदै आएका छन् । यसलाई निर्मुल पारेर नेपाली समुदायमा समानता, सद्भाव, समृद्धि ल्याउनको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । यही उद्देश्य अनुरुप ‘वक फर वेलफेयर’ को मूख्य नारामा ‘ पुरुष र महिलाको अधारमा होइन, सक्षमताको आधारमा तिमी हेरिन्छौ ‘ भन्ने भाव राखिएको छ ।
अष्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यमा हुँदै आएको वक फर वेलफेयर कार्यक्रम भिक्टोरिया राज्यमा आगामी जुन २४ मा हुनेभएको छ । यस कार्य्रक्रममा जुनसुकै उमेर, लिङ्ग, वर्गका व्यक्तिले पनि सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागिताको लागि टिकेट शुल्क निर्धारण गरिएको छ। कार्यक्रमबाट संकलन भएको रकम सामाजिक काममा जाने आयोजक संघले उल्लेख गरेको छ ।
भिक्टोरियामा हुने वक फर वेलफेयर कार्यक्रम बिहान ९ बजे देखि दिउँसो १ बजेसम्म Princes Park 200 – 590 Royal Parade, Carlton North VIC 3054 मा हुनेछ ।
Previousकस्तो रह्यो डोनल्ड ट्रम्प र किम जोङबीचको वार्ता ?
Nextट्रम्प-किमबीच ऐतिहासिक सम्झौता ( पूर्णपाठ )
स्प्रिङ मेलोडिज–२०१५ मा धमेन्द्र र कमल खत्री आउँने
९ भाद्र २०७२, बुधबार ०६:२७
प्रतिभा जन्माउँन ‘मेलबर्न डबली’को सुरसार
२८ बैशाख २०७३, मंगलवार ०४:११
अष्ट्रेलियामा माघे संक्रान्ती विशेष कार्यक्रम गर्दै सुदुर पश्चिमेली समाज
२४ पुष २०७४, सोमबार १०:४८
अष्ट्रेलियामा फोटोग्राफी प्रेमीहरुको लागि ‘फोटो नेपाल’ को ‘फोटो वक’
११ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ११:५७
स्वाइन फ्लुका कारण वीरगन्जका सञ्जय कासरियाको मृत्यु
यी क्षेत्रका पेट्रोलपम्प विस्फोट हुने खतरा !
काठमाडौँ बाहिरका ठूला विमानस्थल तोकिएकै समयमा बन्ने
१० हजार लाइकले ६० हजारसम्म कमाइ